Myanmar Beautiful female Singers : Jenny and Wyne Su Khine Thein | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Myanmar Beautiful female Singers : Jenny and Wyne Su Khine Thein
Myanmar Popular Model and Singer : Wyne Su Khine TheinPhotographer: Nyar Na ( Professional Eye)Designer : Yupar ShweMake Up : Kyaw Kyaw Latt Myanmar Popular Model and Singer: JennyPhotographer: Min Khant Kyaw (Excellent King)Designer : Iris (TYT)Make Up : Kyaw Moe
လူဆိုးFebruary 26, 2010 at 8:36 PMအောင်မလေး ၀ိုင်းစုရယ် ကောက်ထားလိုက်တာများ ဂယ်ပဲ။ ရှည်ပဲ...လိမ်မော်သီးလေး လိုပဲ အခွံတောင် မခွာပဲ စားလိုက်ချင်တယ်။ ဂျင်းနီရေ ပိတ်စမလောက်ရင်ပြောလေ ဘာလို့ လိုက်ကာ ကြီးပတ်ထားရတာလဲ။ နှစ်ယောက် စလုံး လှတယ်၊ ရွတယ် အဲလေ ကြွတယ်...လူဆိုးReplyDeletezawMarch 3, 2010 at 8:06 AMzaw said i have Wyne Su sex tape.who want to see. zippyman13@gmail.comReplyDeleteAnonymousApril 15, 2010 at 2:48 PMthose bitches aint got boobs, does anyone know why?ReplyDeletengengeApril 5, 2012 at 10:54 PM၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းမျက်နှာက ကလေးမျက်ခွက်န`. sexxy ရုပ်လုပ်တ`.မျက်နှာကြီးReplyDeleteAdd commentLoad more...